ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ပြီးဆုံးသွား ခဲ့သည့် နယူဇီလန်တွင် ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်ခြင်းကို အဆုံးသတ် – Let Pan Daily
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ပြီးဆုံးသွား ခဲ့သည့် နယူဇီလန်နိုင်ငံတွင် ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်း (Social Distancing) ကို အဆုံးသတ်…
နယူးဇီလန်သည် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှု နှင့် ကုသဆဲ လူနာ မရှိတော့သဖြင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ကြောင်း ပြသခဲ့ပြီးနောက် ကန့်သတ်ထားသော လူအများကြား ခွာခွာနေရန် ကန့်သတ်ထားမှုများကို ယနေ့တွင် အဆုံးသတ်လိုက် ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်မှု ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နယ်စပ်များအား တင်းကျပ်သော ထိန်းချုပ်မှုများ ချမှတ်ထားမှုမှအပ ယနေ့ည သန်းခေါင်တွင် ပုံမှန်နေထိုင်သွားလာနိုင်မည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ် Jacinda Ardern က ယနေ့ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
တောင်ပစိဖိတ်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည့် နယူဇီလန်သည် ရောဂါပိုးကို အောင်မြင်စွာအမြစ်ပြတ် တိုက်ဖျက်နိုင်သည့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအနည်းငယ်အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို နှိမ်နင်းဖို့ နည်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရောဂါပိုးကို အဝေးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လုံခြုံစွာ မောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူလာအောင် ဦးဆောင်နေပြီ” ဟု ဝယ်လင်တန်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝန်ကြီးချုပ် Ardern က ပြောသည်။
အများပြည်သူနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပွဲအခမ်းအနားများကို ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်လီနှင့် ဧည့်ခံကြိုဆိုရေးကဏ္ဍများကိုလည်း ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံး ပြန်လည်စတင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောသည်။
“နယူးဇီလန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို အမြစ်ဖြတ်နိုင် ခဲ့ပြီလို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်” ဟု Ardern က ပြောသွားခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေသော COVID-19 လူနာ ရောဂါသက်သာ ပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်၍ နိုင်ငံတွင် ယခုအခါ COVID-19 လူနာ လုံးဝ မရှိတော့ကြောင်း ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်များက ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နယူးဇီလန်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို တားဆီးရုံမျှမက ရှင်းလင်းပြတ် သားသော ဖျက်သိမ်းရေး နည်းဗျူဟာကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများမှအပ လူတိုင်းကို အိမ်များတွင်သာ နေထိုင်စေပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အတင်းကျပ်ဆုံးသော ပိတ်ဆို့မှုများကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
Teacher Marie Kaas-Larsen questions her pupils inaclassroom rearrangered for social distancing at the Norrebro Park primary school in Copenhagen, Denmark on April 29, 2020. – Denmark was the first country in Europe to reopen its schools for the youngest pupils on April 15. In addition to practicing social distancing and regular handwashing, classes must be held outdoors as much as possible to limit the spread of the virus. (Photo by Thibault Savary / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Thibault Savary has been modified in AFP systems in the following manner: [April 29, 2020] instead of [April 30, 2020]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by THIBAULT SAVARY/AFP via Getty Images)
သတင်းခုနစ်ပတ်ကြာ ပိတ်ဆို့မှုများကို မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အဆုံးသတ် ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ကျန်ရှိသော ကန့်သတ်များကို ဖယ်ရှားရန် အစိုးရအဖွဲ့က ဇွန်လ ၈ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
“နယူးဇီလန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို ကျွန်တော်တို့ ဖယ်ရှားပစ် လိုက်ပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဖျက်သိမ်းခြင်းဟာ အချိန်ကာလတစ်ခု မဟုတ်သေးပါဘူး၊ ဒါက အမြဲတမ်းအားထုတ်မှုပဲ” ဟု ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စ Ardern က ပြောကြားသည်။
နယ်မြေပိတ်ဆိုမှုများက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နေပြီး ရောဂါကူးစက်မှုမတိုင်မီက နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ အများဆုံး ရင်းမြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ဆေး ရရှိချိန်အထိ အပြည့်အဝ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မည့် အလားအလာ မရှိကြောင်း သိရသည်။
အကွမျးစား ပို့ဈပေးနရေငျး နဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားတှေ မပျေါသှားအောငျ ဖုံးဖုံးဖိဖိ နနေတေဲ့ မမဆောငျး ရဲ့ ဗီဒီယို
ကိုဗဈ ကာလ မှာ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျရငျး အသညျးယား စရာ လုပျ ပွနေ တဲ့ ဆောငျးယှနျးစံ (ဗီဒီယို)
အပွာ ရောငျ ဝတျစုံ လေး နဲ့ ဆကျဆီ ကလြှနျး နတေဲ့ မှူးမှူး
အလနျးစား ဖကျရှငျလေး နဲ့ မောငျလေး တှေ ကွှနေေ တဲ့ မရမျဆိုငျးနူး